မနေ့က ကျနော်တို့ပခုံးပေါ်မှာ ကြယ်တစ်ပွင့်တိုးတယ်
ပြက္ခဒိန် ၇ခုစာ ပြာဖြစ်ခဲ့ကြ
ခါးသက်တဲ့ မုန်တိုင်းတွေနဲ့ ကြုံလေတိုင်း
ကျနော်ရင်နာလို့ မဆုံးပါဘူး လောကကြီးရယ်
ကျနော်တို့ရဲ့ သွေးတွေ ချွေးတွေ
မောင်နှမတွေနဲ့ မိသားစုရဲ့ ဟိုးအဝေးမှာ
ကျနော်တို့ သွေးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာ
ယောက်ျားဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ဒူးမထောက်ဘူး
မနေ့က ကျနော်တို့ပခုံးပေါ်မှာ ကြယ်တစ်ပွင့်တိုးခဲ့ပြီ မေမေ ..။
( ဒီဇင်ဘာ ၁၄ရက်နေ့ ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ အပတ်စဉ်၅၀ ... နောင်ရိုးမြတ်ရဲ့ အပွင့်တိုးခြင်းအမှတ်တရ .. ကျနော်ရေးပါသည်။)
Posted by ဇော် at 1:57 PM4comments:
မသိလိုက်မသိဘာသာနဲ့ နာရီတွေ ကုန်သွားနေတယ်
၀က်ကလေးရဲ့ မီးစိမ်းပွင့်လေး ဘယ်အချိန်ထိ လင်းနေမှာလဲ
ကျနော့်မှာ ဘာမှ မရှိပါဘူး
ရင်ခွင်အကန်းနဲ့ ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်တော့ ချစ်တတ်ခဲ့တယ်
မသေချာမရေရာတဲ့ နောင်လာမယ့် ပြက္ခဒိန်တွေအတွက်
အရူးအမူးဖြစ်ရလွန်းလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မနည်းချွန်းအုပ်
ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာ သိတယ်
စကားလုံးတွေထက် လေးနက်ခြင်းတွေကိုပဲ ငါသိမ်းထားတယ်
ဆောင်းနှင်းတွေ ဆွတ်ဆွတ်ဖြူအောင် ပွင့်ဝေတဲ့နေ့က
ကျနော် သူ့ကို စချစ်ခဲ့တယ်။
Posted by ဇော် at 6:48 PM2comments:
တိမ်ဆိုင်တွေကြား လေယာဉ်ပေါ်က ကျနော်
ဖြူလွ ငုံကြွနေတဲ့ ၀ါဂွမ်းများ
စကားတွေ ပြောနေတတ်တယ် မဇော် တဲ့
ကိုယ့်ညီကလေးရဲ့ စကားကို အမှတ်ရ
၀န်းကျင်ဟာ ပိုလို့ လှလာတယ်
ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး မြည်ဟည်း ဟစ်ကြွေး
ကျနော် လှမ်းလင့် ငေးနေမိတယ်
အဲ့ဒီလို တွေးရင်း ဝေးရင်း
Posted by ဇော် at 7:12 PM 1 comment:
လူနာဆောင် (၁၃) သို့ မှာတမ်း
ဖြတ်ခနဲ တိုက်သွားတဲ့ လေ ဆိုတာ
မုန်တိုင်းရဲ့ အစပျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်
အေးမြမှုရဲ့ သင်္ကေတလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်
ရေငွေ့တွေလဲ ပါနိုင်တယ် ...။
အသက်ကို ၀ ၀ ရှူစမ်းပါ
ရနံ့ကို စားသုံးဖို့ လူဖြစ်ကြတာမှ မဟုတ်တာကွာ
တိတ်ဆိတ်ခြင်းမှာ ကာရံတွေဟာ ပိုကြွတတ်တယ်
ဓမ္မကိုရှာဖွေဖို့ ငြိမ်းချမ်းမှုလို့လဲ ဆိုကြလေရဲ့
ဘယ်သူမှ မရှိလို့ အားငယ်မနေနဲ့
တစ်နေ့နေ့တော့ .... ခွဲရမယ် ...။
သွေးရဲဖို့တော့ လိုလ်ိမ့်မယ် ...။
မင်း အဲ့ဒီတောင်ကိုသာ ကျော်ခဲ့
ငါတို့ ဒီမှာ ရှိနေတယ်။
(ညီနေပိုင် ဆေးရုံရောက်ခြင်း အမှတ်တရ)
Posted by ဇော် at 1:40 AM 1 comment:
ရုတ်တရက် နိုးထလာတဲ့ နံနက်ခင်း
ဘ၀ဟာ အိမ်တစ်ဆောင်မီးတပြောင်မဟုတ်တာလဲ အသေအချာပဲ
ကော်ဖီတစ်ခွက် .. ကဗျာတစ်ပုဒ်
မေ့မရခြင်းမှာ ငါက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နင်းသတ်တဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံ
မြို့ပြဟာ ငါနဲ့ လားလားမှ မတန်
ငါဟာ လူနုံလူအတစ်ယောက်လဲ ဖြစ်ရဲ့
ထားလိုက်စမ်းပါ .. ထားသွားလိုက်စမ်းပါ ...
ရင်ကိုဖွင့် ... နှလုံးသားကို ၀င့်ပြီး ဟစ်ကြွေး
ငါ့သမိုင်းက မှတ်တိုင်တစ်ခုရဲ့ မြေစိုက်ရာ
ဘ၀ဟာ ပိုလို့ အမောက်ကြွလာခဲ့တာ။
ငှက်ဆိုတာ ပျံရင်း သေရမှာပဲ
စကားကြီးစကားကျယ်တွေနဲ့ နှုတ်ခမ်းပဲ့ချင်း မီးမှုတ်ပစ်ခဲ့တာလဲ အကြိမ်ကြိမ်
အဆံမရှိတဲ့ စပါးနှံလို ထောင်လွှား
ဟော့ဒါ ငါကွလို့ အခါခါ ဟောင်ပြတတ်တဲ့ မြေစိုင်ခဲတွေကြား
လူဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခကို ၀ါးရုံပင်ကြီး အော်ရယ်နေတော့
ကျနော်ရှက်လိုက်တာ မေမေရယ် ...
ကိုယ့်မျက်နှာကိုယ် ပုဆိုးခြုံထဲ ဖုံးဝှက်
အခုတော့ ကျနော်နဲ့ မတန်လို့ထင်ရဲ့
အရုဏ်ဟာ နေကိုလဲ ဆောင်ကြဉ်းမလာသေးပါဘူး
ကျနော်ဟာလဲ နိုးထမရောင်နဲ့ မနိုးထဖြစ်ခဲ့သေးပါဘူး
အဲ့ဒီ တောင်ကုန်းပေါ်က မြေပုံဟာ
Posted by ဇော် at 2:44 AM 1 comment:
ဆောင်းနှင်းတို့ ပို လူးလွန့်လာ ...
ပြက္ခဒိန်မှာ ၀င့်ထည်စွာ ....
နင်ရယ် .. ငါရယ် .. သူငယ်ချင်းရယ်
အဲ့ဒီ နွေးထွေးမှုမှာ အလင်းတစ်ပွင့်က
ချစ်သူရယ် .. မောင်ရယ် .. ဘ၀လက်တွဲဖော်ရယ်
တူနှစ်ကိုယ်မှာ တဲအိုပျက် မရှိပေမယ့်
သင်္ခါရကို ငါတို့ အတူရှုတယ်
အချိန်မှန် ဘုရားရှိခိုးသံနဲ့ တရားထိုင်
နင်ရယ် .. ငါရယ် .. အချိန်ရယ်
နင်လဲ အတူ ချက် (Chat) ခဲ့တယ်
ငါတို့တတွေ ... နီးနီးလေးပဲ
စကားတစ်ခွန်းနဲ့ ငါ့ကိုယ်ငါ အဆုံးသတ်
ငါဟာ နင့်အတွက် ပွင့်မယ့်ပန်း
တိုးတိတ်စွာ တောင်းဆုချွေ ....
ချက်စ် (Chess) အတူထိုးရင်း ငြင်းကြတယ်
သံသရာကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လည်ပစ်ခဲ့ကြ
အဲ့ဒါဟာ အချစ်စစ်လား .... ငါမေးချင်တယ်
ပြောမကုန်ဘူး ... သစ္စာဦးရယ်
ငါ့ရဲ့ ကဗျာလေးရယ် ....
လျှောက်လိုက်ကြစို့ .......။ ။
Posted by ဇော် at 5:50 PM 1 comment:
အပြင်မှာ နှင်းတွေ မဝေသေးပေမယ့်
တစ်ပွင့်ချင်း လွင့်ကြွေခဲ့ပေါ့ ...။
ကျနော်ဟာ အရိုးသားဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် မေမေ ...။
ကျနော့်ကို သွေးလန့်စေခဲ့ ...။
ထားသွားခဲ့တာ ...။ ။
Posted by ဇော် at 6:24 AM3comments:
လမ်းဘေးဝဲယာမှာ ငေါင်ငေါင်ကြီး ထိုင်နေကြ...
သူ့ကို ပိုပြီး လွမ်းတတ်လာတယ်...
၃နာရီ ၃၀ မိနစ် ...
ကောင်းကင်တစ်ခုလုံး အလွမ်းတွေနဲ့ အုပ်မှိုင်း...
၃နာရီ ၃၁ မိနစ် .....
၃နာရီ ၃၂မိနစ် ...
သတိရခြင်း .. အလွမ်း... တမ်းတမှု... တစ်ဖြည်းဖြည်း ထုထည်ကြီးရင့်
Posted by ဇော် at 3:42 PM No comments:
...... နဲ့ လွှမ်းခြုံထားသော ....
တစ်ပင်က တစ်ပင် လူးလားခေါက်တုံ့
ဘယ်ဘက်ရင်အုံက သူ့အမည်နာမနဲ့သာ ခုန်လှုပ်တယ်
ဦးတည်နေတာ တစ်ခုတည်း ...
မြင်မြင်သမျှ .... သူသာဖြစ်ရဲ့...
တိုးတိုးဖွဖွ ရွတ်ဆိုတတ်တဲ့ ခေါ်သံလေးတစ်ခု
Posted by ဇော် at 8:49 AM 1 comment:
ဖြတ်တိုက်သွားတဲ့ .... နံနက်ခင်း
ကွန်ပြူတာကို စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်နေခဲ့သော အကြည့်များ၊ စားပွဲပေါ်မှ စာရင်းစာအုပ်များနှင့် လုံးထွေးနေခဲ့ရသော အချိန်များ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ကြပြီ။ ပြောင်းလဲနေသော နာရီလက်တံများနှင့်အတူ နိုက်ဒျူတီလဲ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီ။ ဖုန်းထဲဝင်လာသော ဟက်ပီးဘက်ဒေး နှုတ်ဆက်စာတစ်စောင်၏ အော်မြည်သံကြောင့် ဒီနေ့ ကျနော့်မွေးနေ့မှန်း သတိရမိသည်။
ကုန်ဆုံးသွားသော အချိန်တွေနှင့်အတူ ကျနော်လဲ တစ်စစ ကုန်ဆုံးနေခဲ့ပြီ။
ထိုင်နေရသည်မှာ ကြာလွန်းခဲ့၍ နာကျင်ကိုက်ခဲနေသော ခန္ဒာကိုယ်ကို တစ်ချက်အညောင်းဆန့်ရင်း ထိုင်ရာမှ ဖြည်းညင်းစွာ ကျနော် ထရပ်လိုက်သည်။ ကျနော်နှင့်အတူ ကျနော့် စိတ်အစဉ်သည်လဲ ထိုင်နေရာမှ ထရပ်ခဲ့ပါပြီ။ အာရုဏ်သည် နံနက်ခင်းကို သောင်းသောင်းဖျဖျ ကြိုဆိုရန် အားယူနေခဲ့သည်။
သိမ်းဆည်းစရာ ရှိသည်များ သိမ်းဆည်း၍ ကျနော် အိမ်ပြန်ရန်ပြင်ဆင်ချိန်၌ မောနင်းဒျူတီအတွက် လူများ တစ်ဖွဲဖွဲရောက်လာခဲ့ကြပြီ။ ဟက်ပီးဘက်ဒေး နှုတ်ဆက်သံ .. မောနင်းဟု အော်မြည်သံများသည် လက်ပံပင်ပေါ် ဇရက်ကျသည့်နှယ် ရုံးတစ်ခုလုံး ပြန့်ကျဲလျှက်။ တစ်စစီလိုက်ကောက်ရလျှင် အမှိုက်ကား တစ်စီးစာလောက် ရနိုင်မည်လားမသိ။ ကျနော် ပါးပါးလေး တွေးဖြစ်ခဲ့သေးသည်။ မွေးနေ့၏ နံနက်ခင်းသည် ဆူညံပွက်လောရိုက်နေသည်ကတော့ အမှန်။
ရုံးမှထွက်လာသော လမ်းတစ်လျှောက် ကျနော်ရင်ဆိုင်လာရသော မျက်နှာများသည် အလျှံမီးမီးထင်ဟပ်လျှက် ရှိကြသည်။ နွေရာသီ၏ အခိုးအငွေ့ တံလျှပ်များကို ထိုသူများ၏ မျက်နှာ ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ ကျနော် မြင်တွေ့နေရသည်။ ကျနော်ရော ငြိမ်းချမ်းပါရဲ့လား။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တိုးတိုးဖွဖွ ကျနော်မေးမိတော့ လေပူတွေနှင့် အိုက်လှောင်ဆဲ။
ထိုင်ခုံနေရာတစ်ခုအတွက် စစ်ကြေငြာနေကြသောသူများကို ကျနော် မြင်ရသည်။ မလိုအပ်သော စကားအပိုများနှင့် မျက်နှာသစ်ကြသော သူများကိုလဲ ကျနော်မြင်ရသည်။ ဖြာကျလာသော နေရောင်ခြည်နှင့်အတူ " ငါ " ပေါင်းများစွာ ကျနော် မြင်နေရသည်။ ကျနော် သိမ်ငယ်လိုက်လေခြင်း။
မွေးနေ့မတိုင်ခင် နံနက်ခင်းတစ်ခုတွင် နံနက်စာစားရင် ( ကျနော့်လက်ထောက် ) အကိုကြီး ဂျွန် နှင့် ပြောခဲ့မိသော အကြောင်းအရာလေး ကျနော် အမှတ်ရမိသည်။ အရင်တုန်းကလဲ ကျနော်တို့ တစ်ရက်တွင် ၂၄နာရီ အပြည့်ရခဲ့သည်။ အခုလဲ ကျနော်တို့ ၂၄နာရီအပြည့်ရနေကြသည်။ ဘာ့ကြောင့် အခု ကျနော်တို့ အချိန်မရှိရသနည်း။ အရင်တုန်းကလဲ ကျနော်တို့ အစားအစာ၊ ရေ၊ အောက်ဆီဂျင် နှင့် အရှက်လုံရန် ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျောညီထွေသော အ၀တ်အစားများသာ လိုအပ်ခဲ့ကြသည်။ အခုလဲ အစားအစာ၊ ရေ၊ အောက်ဆီဂျင် နှင့် အရှက်လုံရန် ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျောညီထွေသော အ၀တ်အစားများ သာ လိုအပ်နေကြဆဲဖြစ်သည်။ ဘာ့ကြောင့်များ အဓိက မဟုတ်သော အကြောင်းအရာတွေ ကျနော်တို့ ပို၍ လိုချင်နေကြရပါသနည်း။
စဉ်းစားရင်း ကျနော် ထမင်း နင်သွားခဲ့ရဖူးပါသည်။ ကျနော်လဲ လိုအပ်တာထက် ပိုစားလိုက်မိ၍ပဲ ဖြစ်ရမည်။
နေသည် တစ်ဖြည်းဖြည်း နံနက်ခင်းကို ပို၍ အသက်ဝင်လာနေစေခဲ့သည်။ ကျနော်သည်လဲ တစ်ဖြည်းဖြည်း ရုပ်လုံးကြွလာခဲ့ပါပြီ။ ထို့အတူ အရေးအကြောင်းများလဲ ထင်ဟပ်လာခဲ့သည်။ ပြောင်းလဲနေသော သဘောသဘာဝကြီးထဲတွင် ကျနော်တစ်ယောက်တည်း ရပ်နေ၍ မရမည့်အတူတူ လမ်းလျှောက်ချင်သည်။ စိတ်အေးလက်အေးသာ လမ်းလျှောက်ချင်ပါသည်။ ဘယ်လောက်ကြာကြာ လျှောက်ရမည်လဲဆိုသည်ကို ကျနော် မစဉ်းစားချင်တော့ပါ။ လျှောက်နိုင်သလောက် ကျနော် စိတ်အေးလက်အေးသာ လျှောက်ချင်ပါသည်။
မွေးနေ့နံနက်ခင်း၌ မြင်မြင်သမျှ လူများကို ကျနော် လိုက်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြည့်သောသူ မြင်၏ ဆိုသကဲ့သို့ ကျနော်လဲ ကြည့်သမျှ တွေ့ပါသည်။ ထိုသူများအားလုံး ဆီများဖြင့်သာ မျက်နှာများကို လိမ်းခြယ်၍ အလှဆင်ထားကြလေသည်။
နေမင်းသည် သူ၏ ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်းပင် ကောင်းကင် ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်၍ လောက ပိတ်သားပြင်ကို ကြည့်ရှုနေခဲ့ပြီ။ ကျနော်သည်လဲ နေကြာတစ်ပွင့် ဖြစ်ချင်ခဲ့ပါသည်။
( ဇူလိုင်လ ၂၇ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော အကို (ဒေါက်တာ) ထက်အောင် ( ဧရာဝတီသား ဘလော့ပိုင်ရှင်) ငြိမ်းချမ်းပါစေ။)
Posted by ဇော် at 11:59 PM 1 comment:
ကျနော်နှင့် ...... ကျနော် (သို့မဟုတ် ) မိုင်တိုင်နံပါတ် ၂၄။
တိတ်ဆိတ်၍ ရေငွေ့ပျံနေသော အခန်းကျဉ်းလေး၏ ကုတင်တစ်လုံးပေါ်၌ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် ကျနော် ထိုင်နေခဲ့သည်။ ကျနော့်မျက်စိရှေ့တွင် ဖြူလွလွ နံရံတစ်ခု။ နံရံပေါ်တွင် ကပ်ထားခဲ့သော ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ၌ ထင်ပေါ်နေသော ဖေဖေ ... မေမေ နှင့် သားငယ်တို့၏ အပြုံးများ...။
လေအေးပေးစက်မှ လွင့်ပျံလာသော အေးစက်စက် လေထု၏ ရိုက်ခတ်မှုအောက် တစ်ချောက်ချောက်မြည်နေသော နာရီသံမှ အပ ၀န်းကျင်သည် ပကတိ သုညံလျှက်...။
ဖြစ်တည်ခဲ့ပြီးသော အတိတ်၏ ခြေရာများ။
လျှောက်လှမ်းဆဲ ဖြစ်သော ရေပြင်ညီ။
စက်ဝိုင်းတစ်ခုလို လည်နေခဲ့သော အစနှင့် အဆုံး။
ရင်ထဲမှ တီးတိုးရေရွတ်သံတစ်ခု နားထဲတွင် ဆူညံစွာ ပေါက်ကွဲတော့ ကျနော် အထိတ်တလန့်ဖြစ်ရသည်။
သြော်.... ကျနော်ဆိုသော သစ်တစ်ပင်သည် လေရူးတွင် ရော်ရွက်တွေနှင့် တလွင့်လွင့် လှုတ်ခတ်လျှက် ရှိခဲ့ပြီ။
ဝေ့၀ဲနေသော အတွေးများတွင် ဆုပ်ကိုင်ရခက်ခဲသော ဒဏ်ရာတစ်ခုစီရှိခဲ့သည်။
ကျနော်လုပ်ခဲ့သော အပိုကိစ္စများနှင့် ကျနော်ရှူခဲ့သော အပိုလေများ၊ ကျနော့်ကို ၀င်တိုက်သွားကြသော ခလုတ်များနှင့် ကျနော်က ၀င်တိုက်ခဲ့သော ခလုတ်များ။
အပြစ်မတင်ခဲ့ပါ။ သို့သော် အမာရွတ်တော့ ထင်ကျန်သည်။
မေမေ .... ရိုးသားဖို့ ကြုးစားရင်း မရိုးမသားနဲ့ အသက်ရှူနေရတာကိုက မွန်းကြပ်လွန်းလှပါတယ်ဗျာ....။
ရိုးသားခြင်းကို တစ်ခါ ငတ်မွတ်တိုင်း ကျနော့်ရှေ့တွင် မိုးခါးရေတစ်ပုလင်း အဆင်သင့် ရှိနေတတ်ခဲ့သည်။ အတွေးတွေကို သတ်ဖို့ ဓါးထက်ထက်တစ်လက် ကျနော်သွေးတိုင်း အတွေးတွေက ကျနော့်နယ်မြေတွင် အလံဖြူစိုက်၍ သိမ်းပိုက်ကြသည်။ တစ်စက္ကန့်ရှင်လိုက် တစ်စက္ကန့်သေလိုက်နဲ့ အမှတ်မရှိ ကျနော် မွေ့ပျော်သည်။ ကျနော်နှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင် မရဏမင်းက ကျနော်၏ အလစ်အငိုက်ကို မုဆိုးချောင်း ချောင်းလျှက်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သားကောင်လား မုဆိုးလားပင် ရေရေရာရာ မသိသော ကျနော်က
မေမေရယ်... သမီး ငယ်ပါသေးတယ် .... တဲ့
၂၄ နာရီများရှိ မိနစ်နည်းနည်းတို့တွင် တိတ်တဆိတ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ကြည့်ရသမျှ ကျနော့်ကို လောင်နေသော မီးများ၊ ကျနော်၏ မငြိမ်းသော မီးများသည် ကျနော်ကိုယ်တိုင်ရှို့သော ရှို့မီးများသာဖြစ်ကြောင်း ကျနော်သိလိုက်ရသည့်နောက် ကျနော့်ကိုယ် ကျနော် အထင်သေး၍ စက်ဆုပ်ရွံရှာမိသည်။
တယ်ပြီး ... ငါ ... မိုက်လုံးကြီးပါပကော...။
သို့သော် လက်ကတော့ ရှို့မီးကို ကိုင်ထားဆဲ။ ခန္ဒာလောင်စာကို မီးညှိဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့ဆဲ...။
မမြဲခြင်း အုတ်တိုင်တွေနှင့် ဘောင်ကွတ်ထားသော သြကာသလောကထဲတွင် မြေမှုန်လူသား မိခင်မှ မြေမှုန်လူသားကျနော့်ကို မွေးဖွားခဲ့သည်။ သေးငယ်သော မြေမှုန်ကလေးများဖြင့် ဖြစ်တည်နေသော ကျနော်သည် စွဲလန်းခြင်းများဖြင့် ခန္ဒာဖွဲ့သည်။ မာနကို အုတ်မြစ်ချသည်။ ဘ၀င်တစ်ခုကို ခြေထောက်ပြုသည်။ ထို့နောက်မှ ငါဆိုတော့ အတ္တသည် ကျနော့်မျက်နှာ၏ ထောက်တိုင် လည်ပင်း အဖြစ် တည်ရှိလာခဲ့သည်။ သို့သော် ကျနော် မသိသော၊ ကျနော်မမြင်နိုင်သော ကျနော်၏ နောက်ကျောတွင် လောင်ကျွမ်းနေသော ဖွဲမီးများ.... လေးပင် မောပန်းလွန်းစွာ ကျနော် ထမ်းထားနေခဲ့ရဆဲ။
မေမေ .... ကေလာသနဲ့ နေမိန္ဒရကို သမီး သတိရတယ်..။ ပြီးတော့ ရိုးမတောင်ခြေ.. ငါးဆူတောင် တောင်ပေါ်က ချမ်းမြေ့ဂုဏ်ဝေ ကို လွမ်းတယ်..။
တိတ်ဆိတ်စွာ တိုက်ခတ်လာသော လေပြည်အေးများ၊ ငြိမ့်ညောင်းစွာ လှုတ်ခတ်နေသော သစ်ရွက်များ၏ ဂီတ၊ ကျနော်ရပ်နေခဲ့ဖူးသော သဲမြေပြင်၏ ပူပူနွေးနွေးအာရုံ၊ လွင့်ပျံလာသော ကြေးစည်သံ...၊
မြေမှုန်တွေထဲ၌ လွန့်လူးစွာ တည်ရှိနေသော အသက်ငွေ့၏ စိတ်အစဉ်တွင် အာရုံတစ်ခုသာ ထင်ဟပ်နေခဲ့သည်။ မွတ်သိပ်စွာ ဆာလောင်နေခဲ့သော အရာ...။
မေမေ ... ဒီနေ့ သမီး လူ့လောကထဲကို ၀င်ရောက်လာခဲ့တာ ၈၇၆၆ ရက် ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ သမီး ဘာတွေ လုပ်ခဲ့ပြီးပြီးလဲ...။
ရှင်သန်နေရသော ဒီနေ့တွင် ကျနော် နောင်တကင်းချင်ပါသည်။ မသေချာသော နံနက်ဖြန်၏ အာရုံဦးထက် ဒီနေ့၏ နံနက်ခင်းကို ကျနော် အားရပါးရ နှုတ်ဆက်ချင်သည်။ မရှိတော့သော အတိတ် ဒဏ်ရာများ၏ နာကျင်နေရမှုအစား ဒီနေ့ ကျနော် ကျေနပ်စွာ ပြုံးချင်သည်။
ပြောခဲ့ဖူးသော စကားတစ်ခွန်းကို ကျနော်သတိရမိသည်။
ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘယ်တော့မှ အပြစ်မတင်တော့တဲ့သူ ဖြစ်ချင်ပါသည်။
လောင်နေသော မီးများ၏ အောက် ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် အေးချမ်းချင်သည်။ ရှူရှိုက်မိသော အပိုလေများ၊ မရိုးသားသော အသက်တာအတွက် လူမသိသူမသိ အခိုင်အမာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ချို့နှင့်အတူ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ် တံမြက်လှည်း၍ ဖုန်ခါချင်သည်။
မေမေ ... မောဟိုက်နွမ်းနယ်နေတဲ့ စိတ်ခန္ဒာအတွက် သမီး အသက် ၀၀ ရှူချင်တယ်...။
တည်ငြိမ်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ပစ္စုပန်၊ သတိ။
ထိုသူများနှင့် ကျနော် မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါမည်။ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ သိမ်မွေ့ခြင်း၊ စိတ်လျှော့ခြင်းနယ်ပယ်များသို့ ကျနော့် ခရီးကို ဦးတည်ပါမည်။ ကြမ်းတမ်းသော ခရီးလမ်းတွင် ထမ်းနေရသော ၀န်များ ငှက်မွေးတစ်ချောင်းပမာ ဖြစ်စေဖို့ ကျနော် တာဝန်ယူချင်သည်။ ပိုင်ဆိုင်ရာ ဘာမှမရှိခဲ့သော မြေမှုန်လူသားကျနော်သည် အနောက်ဘက်ကမ်းတွင် နေသူရိန် မေးတင်သောအခါ မြေကြီးအောက်တွင်သာ အိပ်စက်နားခိုရပါလိမ့်မည်။
မေမေ ... ဒီနေ့ သမီး.. ၂၄ နှစ် ပြည့် ခဲ့ ပြီ ....။
(ဇူလိုင်လ ၂၂ရက် ၂၀၁၁ တွင် ကျရောက်သော ၂၄နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် ကျနော် ဖွဲ့ဆိုပါသည်။ )
Posted by ဇော် at 9:27 AM No comments:
နံနက်ဖြန်ဟာ (ထင်သလို) မတောက်ပတော့ဘူး။
ကျနော် ခင်ဗျားကို မချစ်ဘူး...။
လင်း..... ရှ...... အက်..... ကွဲ
ကျနော့် နှလုံးခုန်သံတွေ ပို စည်းချက်ညီသွားခဲ့တာ...။
ခံစားချက်ကို တစ်ခုချင်း ကျနော် သီကုံးမယ်
တစ်လမ်းစီပေမယ့် ပန်းတိုင်ချင်းတော့ တူချင်တယ်။
နွေရာသီက ခုမှ ရင်ဘတ်ထဲမှာ ခင်းကျင်းတာ
ခင်ဗျားရဲ့ လမ်းခွဲကို ကျနော် ရပ်ကြည့်မယ်။
( ဒီလိုပါပဲဗျာ )
( မသိစိတ်မှာတော့ )
Posted by ဇော် at 9:37 PM2comments:
ပုလဲလုံး ရွဲအလှ၊ ရွာစေချင်ပါပေ...။
တို့ပြည်သည်ကား၊ ဆန်စပါး အသက်ပေ
တို့မြေသည်ကား၊ ဆန်စပါး အခက်ဝေ
တို့များရွှင်လန်း ... ပုလဲပန်းကို ခြွေ........။
(စန္ဒရားချစ်ဆွေ၏ တိမ်တမန် သီချင်းကို နှစ်သက်လွန်းစွာဖြင့်.....။ )
Posted by ဇော် at 3:26 AM2comments:
သူရယ် .... ကိုယ်ရယ်....။
( ဖြစ်ချင်တာသာ ပြောရရင် )
( အဲ့ဒီလို )
( တကယ်ပါ )
အိမ်ထောင်မှု ဘုရားတည် ဆေးမင်ရည်စုတ်ထိုး
( ဒီတောင်ရိုးမှာ )
Posted by ဇော် at 5:02 PM3comments:
ဒီနေ့လဲ ကျနော် အဆုံးမသတ်သေးဘူး
ကျနော့်ကို ၀င်ဝင် တိုက်သွားကြတဲ့ ခလုတ်တွေ
(တကယ်ဆို ကျနော်က အနေသာကြီးပါ)
(ပြောသာပြောရတာ စကားလုံးတွေက လေထဲမှာ ၀င့်လွဲကောင်းတုန်း။)
အားကြိုးမာန်တက် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ထိန်းနေတဲ့ကြားက
အခုထိ ကျနော့်မှာ ရုန့်ရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်နေရတုန်း....
ကျနော့်သစ်ရွက်တွေက တစ်ဝေါဝေါ ကြွေနေကြရတုန်း...။
Posted by ဇော် at 1:15 AM 1 comment:
ဝေ့ရဲ့ ကိုယ်သင်းရနံ့လေး ရလိုရငြား
အေးစက်စက် ရေခိုးရေငွေ့တွေ အကြောင်း
မှိုင်းမှုန်ရီဝေလွန်းတဲ့ ပြသဒါး တချို့အကြောင်း
ပြောမထွက်တဲ့ စကားလုံးအချို့ သိမ်းဆည်းထုတ်ပိုး
အသက်ရှူဖို့ မေ့လျော့ခဲ့တဲ့ နေ့တွေမှာ
ကျနော် ခင်ဗျားကို သိပ်ချစ်ခဲ့တယ် မိဝေေ၀...။
Posted by ဇော် at 5:51 PM No comments:
ငါ ဘာတွေများ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့လို့လဲ။
ညီမလေးယက်တဲ့ ဖျင်နီအကျီကလေး သတိရတယ်။
Posted by ဇော် at 4:04 PM2comments:
မိုးတွေသည်းနေတဲ့ အဲ့ဒီ ညနေမှာ
အ၀တ်တစ်ထည် ကိုယ်တစ်ခုသာ ရှိချင်တော့တယ်
သားမွေးတွေကို အပြိုင်ရုံထားကြတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲ
ငါက ဘာမှမရှိတဲ့ အညတရ အမှုန်စတစ်ခုသာ
ရောက်လာသမျှတွေထဲ ပျော်ဝင်ဖို့လဲ ငါမတတ်နိုင်
ငြိမ်းချမ်းစွာသွားပါ လို့ ဆုတောင်းကြရအောင်ပါ။
ငါဆိုတာကိုပါ မြေကြီးအောက်မှာ ထားခဲ့ရမှာ
ဖိနပ်တစ်ဖက် ရေတစ်ဗူးတောင် ကိုင်ဆောင်ခွင့်မရှိမှတော့
ငါ့မှာ ဘာမှမရှိပါဘူးကွယ်...။ ။
Posted by ဇော် at 6:37 PM3comments:
အကယ်၍ နောက်တစ်ကြိမ် လူဖြစ်ခွင့် ကြုံခဲ့ပါလျှင်....
ကျနော်တို့ ၈တန်း နွေကျောင်းပိတ်ရက် အခါသမယတုန်းဆီက ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းသုံးလပိတ်သော နွေကာလဖြစ်သောကြောင့် ကျနော်တို့ ညီအကိုမောင်နှမတစ်စု.. ဖိုးဖိုးကြီး ဦးဆောင်မှုဖြင့် သာယာဝတီသုံးဆယ်ခရိုင်တွင်းရှိ လက်ပံတုန်းကျေးရွာသို့ ရောက်ခဲ့ကြလေသည်။
ကျနော်တို့ရောက်ခဲ့သောအချိန်သည် ပူပြင်းသော နွေရာသီဖြစ်သည်နှင့်အညီ ရော်ရွက်ဝါများ ကြွေလွင့်နေသည်ကို လမ်းတစ်လျှောက်မြင်နေရသည်။ နေပူပူထဲတွင် သုံးဆယ်မြို့မှ ၅မိုင်ခန့်ကွာဝေးသော လက်ပံတုန်းကျေးရွာသို့ လယ်ကွင်းပြင်တွင် ထော်လာဂျီစီး၍ သွားရသော်လဲ... လမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်စီတိုင်းတွင် ရှိနေသော သစ်ပင်များ၏ အရိပ်သည် အခုခေတ် အဲကွန်းများနှင့်မလဲနိုင်သော အေးမြမှုကို ဖြစ်စေ၏။ သဘာဝသည် လူတို့မဖန်တီးနိုင်သော အမှန်တရားဖြစ်လေသည်။
ထိုအချိန်က ကျနော်တို့ကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သော ဖိုးဖိုးကြီးတပည့် အိမ်ရှင်မိသားစုသည် လက်ပံတုန်းကျေးရွာနှင့် ၃မိုင်ခန့် ဝေးကွာသော လယ်ထဲတွင် အိမ်ကြီးရခိုင်ဆောက်လုပ်၍ နေထိုင်ကြသူများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျနော်တို့ ရွာသို့ရောက်ချိန်တွင် နေ့လည်နေခင်းဖြစ်သော်လဲ ခရီးလမ်းမဆုံးသေးသဖြင့် ကောင်းကောင်းအနားမယူနိုင်ကြပါ။ အသင့်ပြင်ဆင်ထားသော နွားလှည်းဖြင့် ခရီးဆက်ရပြန်ပါသည်။
နွားနှစ်ကောင်ကသော လှည်းသည် ယခုခေတ် ဇိမ်ခံကားများကဲ့သို့ သက်သောင့်သက်သာ မရှိလှပါ။ သို့သော် ကောက်ရိုးများခင်းထားသော နွားလှည်းသည် ဇိမ်ခံကားများကဲ့သို့ စိတ်သန္တာန်၌ လှောင်အိုက်မွန်းကျပ်ခြင်းမျိုးမရှိ။ လတ်ဆတ်သန့်စင်သောလေကို တစ်ဝရှူရင်း လမ်းတစ်လျှောက်တွေ့ရသော လယ်သူမကလေးများ၊ တောင်သူဦးကြီးများကို အော်ဟစ်နှုတ်ဆက်ရင်း၊ ဥသြငှက်ကလေးများ တွန်ကျူးမှုကို နားသောတဆင်ရင်း၊ လှည်းဝင်ရိုးသံ တညံညံဖြင့် ခရီးဆက်ရသည်မှာ အလွန်ပင် စိတ်လွတ်လပ်ဖွယ်ကောင်းလှတော့သည်။
ကျနော်တို့လယ်တဲသို့ရောက်သောအချိန်သည် ညနေစောင်းဖြစ်သောကြောင့် အာကာပြင်၌ အလင်းတို့ ဖျော့တော့စွာ ဖြန့်ကျက်ထားသည်မှာ လောကတစ်ခွင်လုံး ပုဇွန်ဆီရောင် နောက်ခံထားသော ပန်းချီကားတစ်ချပ်နှယ်။ ယဉ်သကို ဆိုသကဲ့သို့ အပျိုဖြန်းလေးပမာ ၀န်းကျင်တစ်ခွင်၌ မခို့တရို့ဖြင့် ဖြာကျနေသော ဆည်းဆာချိန်သည် တစ်နေကုန် ခရီးပန်းသဖြင့် နွမ်းနယ်လာသော ကျနော်တို့အားလုံး၏ ရင်ကို အေးချမ်းသွားစေသည်မှာ ယခုခေတ် အိမ်ပြန်ချိန်များနှင့် လားလားမျှ မဆိုင်ပါ။
အိမ်သူသက်ထား ကြီးဒေါ် ချက်သော ချဉ်ပေါင်းဟင်းရည်ကျဲကလေး၊ ဂွေးသီးထောင်းကလေးနှင့် ဘူးသီးကာလသားချက်တို့ဖြင့် အားပါးတရလွေးရသော ညနေစာထမင်းဝိုင်းတွင် ဗိုက်အင့်လွန်းလှသဖြင့် ကျနော်တို့မောင်နှမများ လမ်းပင်ကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်ချင်ဖြစ်ရသည်မှာ ယခုခေတ် ဟိုတယ်များတွင် ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် စားရသော ညစာထမင်းဝိုင်းများနှင့် မည်သို့မှ နှိုင်းယှဉ်၍ ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အညာချက်သည် အလွန်မှ စားမြိန်လွန်းလှပါသည်။
ယာတောတွင်နေထိုင်သောကာလများ၌ အိမ်သူ ကြီးဒေါ်နှင့် သမီးဖြစ်သူ လုံမပျိုလေးတို့ ဆွမ်းထချက်ကြသော နံနက်လေးနာရီကာလများတွင် အအိပ်အလွန်မက်လှသော၊ နေဖင်ထိုးတာတောင် မထချင်အောင် အပျင်းထူတတ်ပါသော ကျနော်တို့မောင်နှမများ အိပ်မှုံစုံမွှား လိုက်ထကြရသည်။ သို့သော် ကြည်လင်လတ်ဆတ်သော နံနက်ခင်းအာရုဏ်ဦးလေပြည်ကလေးကိုများ ရှူလိုက်ရရင်ဖြင့် မကြည်မလင်ဖြစ်နေသော စိတ်များ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက်ဖြစ်ကုန်ကြသည်မှာ နောက်တစ်ခါ ပြန်အိပ်လိုက်ရမည်ကိုပင် နှမြောမိသည်အထိပါပေ။
ထို့နောက် ကျနော်တို့မောင်နှမများလဲ ဖိုးဖိုးကြီး၏ ခိုင်းစေချက်အရ ယာထဲဆင်းဖို့ပြင်ကြရလေသည်။ တကယ်ဆို ကျနော်တို့ လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါချေ။ သို့သော် ကျနော်တို့၏ ဖိုးဖိုးကြီးသည် ကျနော်တို့မောင်နှမတစ်သိုက်အား ပီဘိ တောသားကလေးများအသွင် ကျောင်းပိတ်ရက်ကာလများတွင် ပြောင်းလဲပေးခဲ့ချေသည်။ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဟု မသိရသော်လဲ ကျနော်တို့ အလွန်မှပင် ပျော်ရွှင်ရပါသည်။
နံနက်စောစော ယာတောမှ ထမင်းပူပူကလေးကို ပဲပေါင်းကလေး ဆီကလေးဖြင့်စမ်းကာ နယ်ထားသော ပဲပြုတ်ထမင်းပူကလေးနှင့် ခရမ်းချဉ်သီးထောင်းကလေးကို ရေနွေးပူပူမှုတ်၍ အားပါးတရ လွေးပြီးသကာလ ကျနော်တို့မောင်နှမတစ်စုလုံး အိမ်ကြီးရှင်၏ သားသမီးများဖြင့် လယ်ထဲတွင် ထွန်သူထွန်၊ ကောက်စိုက်သူစိုက်၊ ပေါင်းသင်သူ ပေါင်းသင်၊ ပျိုးနှုတ်သူ နှုတ်ဖြင့် အလွန်မှကို ပျော်စရာကောင်းလှပါသည်။ ကျနော်တို့တစ်တွေကတော့ဖြင့် ဘာမှမလုပ်တတ်သူများ ပီသစွာ အိမ်ကြီးရှင်၏ သားပျိုကလေးများဖြစ်သော အကိုများ ဦးဆောင်မှုဖြင့် နွားကျောင်း ကျွှဲကျောင်းလိုက်ရလေသည်။
ကျနော်တို့နေထိုင်ရာ ယာတော၏ အရှေ့ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများ အစီအရီရှိကြသည်။ ယာတောအိမ်၏ အ၀င်ဝတွင် တောင်ကဲ့သို့ မိုးထိုးမတတ် စုပုံထားသော ကောက်ရိုးပုံအမြင့်ကြီးရှိလေသည်။ ထိုကောက်ရိုးပုံကြီးဘေး၏ တလင်းပြင်၌ စပါးနယ်သော စပါးလှေ့သော နေရာရှိရကား ပုံထားသောစပါးပုံကြီးမှာလဲ တောင်ပူစာကြီး တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်။ ထိုကောက်ရိုးပုံနှင့် တလင်းပြင်မှာ ကျနော်တို့ မောင်နှမများ အဆော့လွန်ရာ ဌာနီများလဲဖြစ်သည်။ ကောက်ရိုးပုံပေါ် တက်ဆော့ရသောအချိန်များ တလင်းပြင်တွင် ပတ်ပြေးနေရသော အချိန်များသည် ယခုခေတ် ဂိမ်းဆိုင်များတွင် ဂိမ်းတိုက်နေရသည်နှင့် လားလားမျှမတူညီပါ။ အညောင်းအညာမမိသည့်အပြင် မျက်စိလဲ မကိုက်ပါ။ ပိုက်ဆံလဲမကုန်ပါ။ အချိန်လဲအလွန်အကြူး မကုန်ခဲ့ပါ။ မည်သို့မှ မတူညီနိုင်သော လွတ်လပ်မှုမျိုးပင်။
ညနေစောင်းအချိန်များတွင် ယာတောအိမ်၏ အနောက်ယွန်းယွန်း တစ်ပြလောက်အကွာအဝေးတွင်ရှိသော ရိုးချောင်းကလေးသို့ ကျနော်တို့ ကျွဲရေချိုးဆင်းကြသည်။ ချောင်းထဲသို့ ကျွဲကြီးစီး၍ဆင်းပြီး ပစ်ဆော့ရသည်မှာ အလွန်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းလှသည်။ ကျွဲများကို ချောင်းထဲသို့မောင်းနှင်လာသော လမ်းပေါ်တွင် ဖရဲခင်းများရှိသည်။ ဖရဲသီးများ မြေပြင်ပေါ်တွင် အစီအရီ လဲလျောင်းနေကြသည်မှာ အစိမ်းရောင်ခေါင်းအုံးများ စီချထားသည့်အလား အလွန်မှ ကြည့်ကောင်းလှသည်။ အရွက်များအောက်မှ ဖရဲသီးများကို ဆွတ်ယူ၍ လက်မောင်းဖြင့် ပြင်းပြင်းခုတ်ပြီး အားရပါးရကိုက်စားရင်း ကျွဲစီးရသည်မှာ မည်သို့မှ မမေ့နိုင်သော အရသာပင်။ ထို့နောက် ကျွဲပေါ်ထိုင်ရင်း ရသမျှ သီချင်းများ သူ့ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် အလုအယက်အော်ဟစ်သီဆိုကြရင်း ညနေဆည်းဆာနေခြည်နွေးနွေးတွင် ချောင်းရိုးထဲဆင်း၍ ကျွဲများဖြင့်အပြိုင်ဆော့ကစားရသော နေ့ရက်များသည် ကျနော့်အတွက် ညစဉ်မက်သောအိပ်မက်များပမာ။
ညဦးတွင် လူကြီးများစကားဝိုင်း၌ ရှေ့ဖြစ်နောက်ဖြစ်များ နားထောင်ရင်း၊ အမ လုံမပျိုကလေး ဗိုင်းငင်သည်ကို ကြည့်ရင်း၊ အိမ်သူ ကြီးဒေါ်၏ ပေါင်ပေါ်ခေါင်းအုံးရင်း ကောင်းကင်ကျယ်ကျယ်ကြီးကို ကြည့်ရသည်မှာ အလွန်မှ စိတ်ချမ်းသာစဖွယ်ကောင်းလှသည်။ ကောင်းကင်ကျယ်ကျယ်ကြီးရှိ မောင်ရင်ဆိုင်းထမ်းကြယ်ကလေးများ၊ လင်းလင်းလက်လက်ဖြင့် ရောင်ဝါထုတ် မျက်နှာချီနေသော ကိုရွှေဓူဝံကြယ်၊ အပျိုကလေး ယိမ်းနွဲ့ဟန်ဖြင့် ကပြ ဖျော်ဖြေနေသော ခုနှစ်စဉ်ကြယ် မောင်နှံများ၊ သူတို့နှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင်တော့ ဦးဖိုးလမင်းကြီး၏ တစ်လောကလုံး ငါလွှမ်းခြုံထားသည်ဆိုပြီး ၀င့်ဝင့်ကြွားကြွားဖြစ်နေလိုက်ပုံများ ရှင်ဘုရင်ကြီး ဗိုလ်ရှုသဘင် ခံနေသည့်နှယ်ပင်။
လက်ဖက်ပန်းကန်လေးချ ရေနွေးကြမ်းအိုးလေးတည်ရင်း ယာတောနီးနားချင်းတောင်သူဦးကြီး ဒေါ်ကြီးများ၏ ရှေ့ဖြစ်နောက်ဖြစ်စကားများကို နားထောင်းရင်း ခံစားရသော ညဉ့်ဦးသည် မြို့ပြညဉ့်ဦးများနှင့် မည်သို့မျှမယှဉ်နိုင်သော ငြိမ်းချမ်းမှု ရသကိုပေးစွမ်းနိုင်လွန်းသည်။ ညဉ့်ဦး၏ လေအေးအေးလေးများ၊ ယာတောဘေးရှိ ဆိတ်ဖလူးပင် သနပ်ခါးပင် ညမွှေးပင်တို့မှ သင်းပျံလာသော ရနံ့များ၊ ကြည်လင်၍ ဆိတ်ငြိမ်သော ၀န်းကျင်တို့ဖြင့် ယာတော၏ ညသည် အပျိုမကလေး မျက်လွှာချသကဲ့သို့ ငြိမ်သက်၍ အိနြေ္ဒရလှသည်။ ထိုသို့အချိန်များကို ကုန်စေကြပြီးနောက် ခုနှစ်စဉ်ကြယ် အမြီးမထောင်ခင် ဦးကြီးဒေါ်ကြီးများ နှုတ်ဆက်၍ ပြန်ကြသောအခါ ကျနော်တို့အိမ်သားများလဲ ဘုရားဝတ်တက်ပြီးနောက် ကိုယ်စီ အိပ်ယာဝင်ခြင်းဖြင့် ညကို နှုတ်ဆက်ရသည်မှာ အလွန်မှ စိတ်ကြည်လင်ဖွယ်ကောင်းလှတော့သည်။
ကျနော်တို့ နွေကျောင်းပိတ်ရက် သုံးလတာ ကာလများသည် အလွန်မှ စိတ်ပျံ့ဆွတ် ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။ သင်္ကြန်ရက်များအတွင်း ရွာဘုန်းကြီးကျောင်းသွား၍ လုပ်အားပေးခြင်းများ၊ လပြည့်လကွယ်ရက်များတွင် ယာတောနှင့် နှစ်မိုင်ခန့်ဝေးသော တောင်ပေါ်ရှိ ဘုရားကလေးသို့ လှည်းများကိုယ်စီဖြင့် ဘုရားဖူး ထွက်ရခြင်းများ၊ ကျန်သောနေ့ရက်များတွင် တောင်သူအလုပ်များ ကူလုပ်ပေးခြင်းများ၊ အမ အပျိုကလေးများဖြင့် ဟင်းရွက်ခူး ပန်းခူးထွက်ခြင်း၊ အကိုလူပျိုကာလသားများဖြင့် လူပျိုလှည့်ခြင်း၊ မာလကာပင်ပေါ်အပြိုင်တက်ကြခြင်း၊ ဒီဒိုးဥ အပြိုင်တူးကြခြင်း၊ နွားနို့ညှစ်ခြင်း၊ နွားစာ ၀က်စာပြင်ဆင်ကြခြင်း၊ ကန်သင်းရိုးတစ်လျှောက် တုတ်တစ်ချောင်းဖြင့်ရမ်း၍ သီချင်းတစ်ကြော်ကြော်အော်ရင်း ယာတောအိမ်သို့ပြန်ရသော ညနေခင်းများ။
ကျနော် သိပ်ချစ်ပါသည်။ တသသ အမှတ်ရနေမိသည်အထိ သိပ်ကို မြတ်နိုးမိရသော ကျနော်၏ ကျောင်းပိတ်သော နွေရက်များ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသည်။
အကယ်၍ ကျနော်သည်သာ နောက်တစ်ကြိမ် လူဖြစ်ခွင့် ကြုံခဲ့ရသည်ရှိသော်.....။
( ဤစာမူသည် ဧပြီလ ၁၂ရက် ၂၀၁၁ခုနှစ် အင်္ဂါနေ့တွင် ကျရောက်ခဲ့သော ကျနော်၏ စာရေးခြင်းသက်တမ်း ၂နှစ်ပြည့်အတွက် အမှတ်တရအဖြစ် ရည်စူးပါသည်။)
Posted by ဇော် at 7:38 PM3comments:
ဟီရိသြတပ နားမလည်တဲ့ အရပ်ဒေသက
အများသူငါ အားကျနေတဲ့ နေရာမှာ
လူတစ်ချို့ ဂုဏ်ယူတတ်ကြတဲ့ အမိုးအကာအောက်
ဒေါင်းယောင်ဆောင်သော ကျီး ဥပမာကို
ရိုးသားဖြူစင်မှုတွေ ဆယ့်နှစ်ရာသီ အခိုင်လိုက် ပွင့်ကြတယ်
ကျေးတောနံ့ကို ကျနော် ချဉ်ချင်းတပ်မိတယ်
မိဘဆိုတဲ့ ထမ်းပိုးသာ ကျနော့်ပခုံးထက် ရှိမနေခဲ့ရင်
Posted by ဇော် at 10:37 AM 1 comment:
ငါ ဦးသန့် ထက်
လူမိုက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဟစ်တလာ ကို
ငါ သခင်အောင်ဆန်း ထက်
သခင် ကိုယ်တော်မှိုင်း ကို
ပို လေးစားတယ် ...
ငါ မင်္ဂလသုတ် ထက်
ငါ လွန်းထားထား ၀တ္ထုတွေ ထက်
မြန်မာ့လူနေမှု ဘ၀ကို သရုပ်ဖော်တဲ့
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် ၀တ္ထုတွေကို
အမေဟာ ဘုရား ..
ငါ့အတွက် ငါ့ချစ်သူက အလှဆုံး ...
ငါ လူအ တစ်ယောက်
ဒါပေမယ့် ငါ့ကိုယ်ငါ မြန်မာလို့ထုတ်ဖော်ပြောဖို.
Posted by ဇော် at 6:50 PM2comments:
ပိတောက်တွေ မဖူးကြတော့တဲ့အကြောင်းက ရိုးရိုးလေးပါပဲ
၀န်းကျင်မှာ အစိမ်းရောင်အစား အဆီပြန်အငွေ့အသက်တွေ
မှိုစော်နံ စက္ကူတွေ ပလူပျံနေခဲ့ပြီ
သူငယ်ချင်းရယ် _______ ငါ ရင်နာတယ်....။
ငွေဖလား ... သပြေခက်နဲ့ မြို့မငြိမ်းသီချင်းတွေထက်
အတွင်းခံပေါ်ယဉ်ကျေးမှု၊ အရက်စော်နံ အငွေ့အသက်တွေ
ဒီခေတ်ကြီးမှာ မြန်မာဖြစ်ရတာ ငါ သိမ်ငယ်မိတယ် သူငယ်ချင်း
ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှု ဆိုတာကို နားမလည်ကြတော့သူတွေ
သူငယ်ချင်းရယ် ____________ တွေးမိလေတိုင်း
(တော်ပြီဟာ .... ဆက်မရေးချင်တော့ဘူး)
Posted by ဇော် at 7:20 PM3comments:
သူများတွေ ပြောနေကြတဲ့ သင်္ကြန်ဆိုတာ
ဘုံဆိုင်ထဲက မီးတောက်အရက်လို ရေရောမှ ဖြစ်မယ့်အမျိုး
ဘယ်သူမှ ဂရုပြုမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး
ရာသီချိန်မဟုတ်ပါဘဲ ပွင့်ဖို့ကြိုးစားနေမိတဲ့ ပန်းရိုင်းလို
မေမေ့ရင်ခွင်ကို တခုတ်တရ လွမ်းတယ်...။
Posted by ဇော် at 6:04 PM 1 comment:
မလုပ်တော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ အရာတွေ ရှိတယ်
နာကျင်မှုနဲ့ ကျနော် ၀င်တိုက်မိလေတိုင်း
မေမေ့ရင်ခွင်ကို အရှင်လတ်လတ် ငတ်မွတ်ရတယ်
Posted by ဇော် at 6:56 PM2comments:
ရေနစ်သူလို မရေမရာ ဖမ်းဆုပ်မိသမျှ
ကိုယ့်အတ္တတွေပဲ ကိုယ် ပြန်ပြန်ရနေတယ်
ငါ တစ်ယောက်တည်း ထွန်းရေးငင်နေမိခဲ့တာ
Posted by ဇော် at 6:24 PM2comments:
ရှူနေရတဲ့ လေတွေကလဲ ညစ်ညမ်းတယ်
လမ်းမှားမလိုက်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထိန်းကျောင်းရင်းက
၀န်ရိုးတစ်ပတ်ပြီး တစ်ပတ် လည်ခဲ့ပြန်တယ်
ဒီနေ့လား ____ နံနက်ဖြန်လား
ငါလဲ မသိဘူး၊ သူလဲ မသိဘူး
အသက်တစ်ခါရှူ ၊ တစ်ခါထုတ်
Posted by ဇော် at 5:28 PM No comments:
ကျနော့်တွင် ပန်းလေးတစ်ပွင့် ပွင့်လေပြီ။
ကြိုတင်မျှော်လင့်ထားခြင်းမရှိပါဘဲ ထိုနေ့က သူ ကျနော့်ကို စကားပြောခဲ့သည်။ ကျနော် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ကျနော် ရုတ်တရက် သူနှင့် ခလုတ်တိုက်မိခဲ့ဖူးပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် သူ ကျနော့်အနားရောက်လာခဲ့သည်။
နေ့တွေနှင့် အရောတ၀င်နေလေ့မရှိသော ကျနော် ထိုနေ့က အမှတ်တမဲ့ ရင်ခုန်ခဲ့ဖူးပါသည်။ သူသည် ပါးဖောင်းဖောင်းလေးနှင့် အလွန်တရာ ချစ်စဖွယ်ကောင်းနေခဲ့သည်။
" မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိတယ်ဆိုတာကို ကျနော် မယုံကြည်ဘူးဗျ "
ကျနော် ကြွေးကြော်ခဲ့ဖူးသော စကားလုံးအချို့ ကျနော့်ကို ဟားတိုက်ရယ်မောနေကြသည်။ သူသည် ကျနော့်အတွက် စံပယ်တစ်ပွင့် ဖြစ်သည်။
တစ်ခါတရံ မှုန်ကုတ်ကုတ်ဖြင့် ရှိနေတတ်ပါသောသူ၊
" ကျနော် ခင်ဗျားကို မိစံပယ်လို့ ခေါ်ပါရစေ ... ချစ်သူ "
ကျနော့် အိမ်ဘေး မြေနီလမ်းလေးတွင် စံပယ်တွေ ကျနော်စိုက်ခဲ့ဖူးပါသည်။ အခု ကျနော့်နှလုံးသား မြေနီနီပေါ်တွင် မိစံပယ် နေရာယူလေပြီ။
" ခင်ဗျားကို ကျနော် မချစ်ချင်ပါဘူးဗျာ "
ကျနော့် သံဓိဌာန်တစ်ချို့ ရနံ့တွေရဲ့ ထုံမွှန်းမှုအောက် ပျက်ပြယ်သွားခဲ့သည်မှာ ရက်ပေါင်း သုံးဆယ်ရှိခဲ့ပြီ။
သူ့မျက်ခုံးနက်နက်လေးတွေထက် ကျနော် ခိုတွယ်ချင်သည်။
သူ့နှုတ်ခမ်းထူထူများကို ကျနော် ပန်းချီဆွဲချင်သည်။
ကျနော့်မြတ်နိုးမှုသည် တစ်စစ နက်ရှိုင်းလာသည်။
သူ့ကို ကျနော် အလွန်ချစ်ပါသည်။
" ခင်ဗျားအခုနေ ဘာလုပ်နေမှာပါလိမ့် "
ကျနော် တမ်းတမ်းတတ သတိရမိပါတယ် မိစံပယ်။
ကောင်းကင်ဟာ ရောင်နီကို သယ်လာသလို ....
အိမ်ခေါင်းရင်းမှာ စံပယ်တွေ လှိုင်နေသလို...
လက်ဆေးမိုးတွေ တစ်ဖြိုက်နှစ်ဖြိုက် ရွာနေသလို...
ကျနော် သိပ်ကို သတိရမိပါတယ်။
သတိရခြင်းတွေကိုသာ စာတစ်ပုဒ်ဖွဲ့သီရရင် သူ့နာမည်တစ်ခုသာ ကျနော်ရေးတတ်တော့မည်ထင်သည်။
" ခင်ဗျားက ကျနော့်ရဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပါ မိစံပယ် "
တိုးတိတ်ညင်သာ စကားပြောလေ့ရှိသော သူ့ကို ကျနော် ခနခန ငေးကြည့်ခဲ့မိဖူးပါသည်။
တစ်ခါတရံ သစ်ရွက်ကလေး တစ်ရွက်နှင့် တူသည်။
တစ်ခါတရံ ဆီဇာဘုရင်ကြီးကဲ့သို့ ရင်ကော့ခေါင်းမော့ပြချင်နေပါသေးသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ သူသည် ကျနော့်ရှေ့တွင် ယုန်ငယ်လေးပမာ အလွန်အပြစ်ကင်းလှသည်။
" ခင်ဗျား ဘာလို့ ချစ်ဖို့ကောင်းနေတာလဲဟင် "
ကျနော့်မေးခွန်းတိုင်းကို မသိချင်ယောင်ဆောင်တတ်ပါသော သူ့ကို ကျနော်ပို၍ မြတ်နိုးရပါသည်။ ကျနော့် မြေရိုင်းရင်တွင် စံပယ်တွေ အုံနှင့်ကျင်းနှင့် ပွင့်လေသည်။
ကျနော့်ဘ၀တွင် စိတ်အချမ်းသာဆုံး အချိန်တစ်ချို့မှာ သူနှင့်အတူ ဘုရားရှိခိုးရသော ကာလများဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ တစ်ပတ်တွင် တစ်ရက် သတ်သတ်လွတ် အတူစားသည်။ ညအိပ်ယာဝင်ခါနီးတွင် ဘုရားအတူရှိခိုးသည်။ ရုပ်ရှင်အတူကြည့်သည်။ စာအုပ်အတူ ဖတ်သည်။ စာအတူ ကျက်သည်။ အချိန်တူ အိပ်ယာဝင်လေ့ရှိသည်။
ထို့သို့ဖြင့် ကျနော့်နေ့ရက်များ အလွန်တစ်ရာ ခမ်းနားလှပလွန်းခဲ့ပါသည်။
" ပြန်လာခဲ့ပေးပါ မိစံပယ်.... ကျနော့်ကို ထားမသွားပါနဲ့ဗျာ.... ပြန်လာနိုင်အောင် ကြိုးစားပေးပါ... "
ကျနော် သူ့ဆီမှ တစ်ကြိမ်တစ်ခါသာ လှိုက်လှုက်လှဲလှဲ တောင်းဆိုခဲ့ဖူးပါသည်။ ကျနော့် စံပယ်ပန်းကလေးနှင့် ဝေးကွာရမှာကို ကျနော် အလွန် တွေးပူမိပါသည်။
" သြော် .. ခင်ဗျားကို ဆုံးရှုံးရမှာ ကျနော်သိပ်ကို စိုးရိမ်မိရပါတယ် မိစံပယ်ရယ်... "
ကျနော် သူ့ကို သိပ်ချစ်ပါသည်။
ကျနော် စိုက်ပျိုးခဲ့သော ပန်းလေး မိစံပယ်ကို ညင်ညင်သာသာ နမ်းရှိုက်ချင်ပါသည်။
ကျနော့်တွင် ရှိသော မြတ်နိုးရမှုများအားလုံး သူ့တစ်ယောက်တည်းသာ ကျနော် ဆင်မြန်းပေးချင်ပါသည်။
" ကျနော် ခင်ဗျားကို သိပ်ချစ်ရပါတယ်ဗျာ... "
ကျနော့်တွင် ထိုစကားတစ်ခွန်းတည်းသာ ပဲ့တင်ထပ် ကျန်ရစ်နေပါတော့သည်။
ကျနော် ထိုစကားတစ်ခွန်းဖြင့် နံနက်ဖြန်ကို ခရီးဆက်ပါဦးမည်။
စံပယ်သည် ကျနော့်နှလုံးသား မြေနီနီတွင် ဖြူစင်စွာ တည်ရှိနေခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
( ဤစာမူကို ကာယကံရှင်များသာ သိသော အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုအား ရည်ရွယ်၍ ကျနော်ဖွဲ့သီပါသည်။ )
Posted by ဇော် at 10:59 AM2comments:
မတ်လ ၁၃ ...
ကမ္ဘာကြီးက နွေဥတုကို အခုမှ ခြေစလှမ်းတာပါ
တကယ်ဆို ...... ကိုယ် အသက်ရှူ မ၀ဘူး...
ကိုယ့်လက်ထဲက တံစဉ်သွားနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ပြန်ရှခံနေရတာ
အခု .. ကိုယ်ပြုံးနေပါတယ်.....
နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ကိုယ် ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်.....
ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက် .. ကိုယ်ရဲရင့်ပြရဦးမယ်..
ကိုယ်ဆိုတဲ့ကောင်က .. ကိုယ်တိုင်သာ အသုံးမကျတာ...
ဝေဖန်ထိုးနှက်ချက်တွေကိုတော့ .... တူးတူးခါးခါး သပိတ်မှောက်ချင်တဲ့ကောင်...
စာမျက်နှာတွေကို အသစ်တစ်ဖန် ပြန်ဆန်းစစ်မယ်...
ဘယ်သူ့ကိုမှ .. ဘယ်တော့မှ အပြစ်မတင်တော့တဲ့သူ ဖြစ်ချင်တယ်....။
( ဒီနေ့ .. ရုံးမှာ အဆူခံရတယ်ဗျာ... ဖြစ်တတ်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ကျနော် ထိထိခိုက်ခိုက် နာကျင်တယ်...။ )
Posted by ဇော် at 1:43 AM 1 comment:
တစ်နေ့ ... ကျနော့်တွင် ချစ်သူ ရှိလာသော အခါ .........
ရာသီဥတု သာသာယာယာရှိသော တနင်္ဂနွေပီသစွာ ဆည်းဆာ၏ ဖြန့်ကျက်ထားသော အလှက ရွှေအိုရောင် တောက်ပလွန်းလှသည်။ ညင်ညင်သာသာ ပြေးလွှားဆော့ကစားနေသော လေပြည်တို့ လှုတ်ခတ်မှုကြောင့် သစ်ရွက်တို့ ယိမ်းနွဲ့နေကြသည်။ ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်စွာ လှုပ်ရှားနေကြသော လူနည်းစုလေးကြောင့် ၀န်းကျင်တစ်ခို၌ ဆိတ်ညံခြင်းတို့ အတိပြီးလေ၏။ ဆည်းလည်းသံ လေတိုးသံမှ အပ ဆူညံခြင်း အလျဉ်းမရှိ။
အရိပ်တကာ အရိပ်တို.တွင် ဘုရားရိပ် တရားရိပ် လောက်အေးမြလွန်းသော အရိပ်သည် တစ်လောကလုံးတွင် ရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ဟု တွေးနေမိသည်။
တကယ်ဆို သူ အိမ်ပြန်ချင်လှပြီ။ ရက်သတ္တပတ်အတွင်း စာမေးပွဲရှိသဖြင့် ညက အိပ်ယာဝင်နောက်ကျခဲ့ခြင်းကြောင့် သူ အိပ်ချင်စိတ် ဖြစ်နေရသည်။ ထို့ပြင် ရွှေတိဂုံဘုရား တနင်္ဂနွေ သန့်ရှင်းရေးအသင်းနှင့်အတူ ဘုရားကုန်းတော်တစ်ခုလုံးအား တံမြက်လှည်းခြင်း၊ ကြမ်းတိုက်ခြင်း၊ ပန်းအိုးလဲခြင်း၊ ပန်းအိုး သောက်တော်ရေခွက်များ ဆေးရခြင်းတို့ကြောင့် သူ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေရသည်။ မေမေ့အတွက်ဟု ရည်စူး၍ ကျောင်းကိစ္စ၊ လူမှု အသင်းအဖွဲ့ ကိစ္စများဖြင့် မအားမလပ်ရှိနေသည့်ကြားမှ မေမေ့မွေးနေ့ဖြစ်သော တနင်္ဂနွေနေ့၏ သန့်ရှင်းရေး အသင်းတွင် သူပါဝင်ခဲ့သည်မှာ နှစ်ကာလ အတန်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ကျယ်ပြန့်ကြီးမားလှသော ရွှေတိဂုံကုန်းတော်တစ်လျှောက် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရသည်မှာ မလွယ်ကူလှချေ။ သို့သော် သူ အလွန်ပျော်ပါသည်။ အသင်းသူ အသင်းသားများ၏ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ သဒ္ဒါနက်ရှိုင်းမှုများကြောင့် ကြည်လင်နေသော မျက်နှာကလေးများက မြင်ရသူရင်ကို အေးမြနေစေသည်မှာ အမှန်။ ထို့ကြောင့် တနင်္ဂနွေညနေခင်းတိုင်းသည် သူ့အဖို့ ရေးကြီးခွင်ကျယ် နေ့ရက်များ ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဓိပါယ်အရှိဆုံးသော နေ့ရက်များလည်း ဖြစ်သည်။ သူ မြတ်နိုးရသော အချိန်များလည်း ဖြစ်ခဲ့လေသည်။
( ဒီနေ့ နောက်ကျနေတာလား... မလာတော့တာလား မသိဘူး.....)
တစ်ယောက်တည်း သတိလက်လွတ်ရေရွတ်မိပြီးမှ သူ အလန့်တကြားဖြစ်သွားရသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်များ ကြားသွားလေမလား စိုးရွံ့မှုဖြင့် မလုံမလဲ ဖြစ်မိရသည်။ အူကြောင်ကြောင်နိုင်မိသည့် အဖြစ်ကြောင့် သူ့မျက်နှာ၌ အပြုံးငွေ့ငွေ့ ထင်ဟပ်၏။ တကယ်က သူတစ်စုံတရာကို စောင့်မျှော်နေခဲ့တာပါ။ ဒီလိုစောင့်မျှော်ခြင်းမျိုးသည်လည်း သူချစ်သော တနင်္ဂနွေ၌ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ပါဝင်လာခဲ့သည်မှာ တနင်္ဂနွေအသင်းသို့ သူစရောက်ကတည်းက ဖြစ်သည်။
တမင်တကာ လုပ်ယူခြင်းတော့ဖြင့် မဟုတ်ခဲ့ပါ။
သို့သော် .. သူစောင့်နေချင်ပါသေးသည်။
တစ်ဖြည်းဖြည်းနှင့် တနင်္ဂနွေအသင်းဝင်များ ပြန်ကုန်ကြပြီ။ သူတစ်ယောက်တည်းသာ ဇရပ်တိုင်ကို မှီ၍ အဝေးသို့ ငေးကောင်းဆဲ...။ ဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ်ရှိ လူသွားလမ်းသို့ မျှော်ကြည့်နေရင်းက .. သူ့အမြင်အာရုံတို့ တစ်နေရာသို့အရောက်တွင်တော့.. ရင်၌ ထိတ်ခနဲပင် ဖြစသွားရသည်။
နောက်ဆုံးတော့လဲ သူမျှော်နေသော အချိန်သည် ရောက်လာခဲ့လေပြီ။
ကျေနပ်မှုကြောင့်ထင်.... သူ့မျက်ဝန်းတို့ ရွှန်းလဲ့လာကြသည်။ ခပ်ဝေးဝေးက ဖြစ်လင့်ကစား.. သူသိနေပါသည်။ သူ မြတ်နိုးရသော အရိပ်ကလေးနှစ်ခု။ တစ်ဦးကို တစ်ဦး လက်ချင်းတွဲလို့...။
တစ်ရွေ့ရွေ့ ဖြေးဖြေးညင်ညင် လှမ်းလာနေကြပုံက လေနှင့်အတူ လွင့်မျောလာသကဲ့သို့။
ကြည့်နေရင်းဖြင့် သူထိုင်နေသော ဇရပ်ရှေ့ ညောင်ပင်အောက်သို့ သူတို့ ရောက်လာခဲ့ကြသည်။ ဇရပ်နှင့်ညောင်ပင်သည် ခြေ ၅လှမ်းစာ အကွာအဝေးမျှသာ ရှိသဖြင့် စကားပြောသံကိုပင်လျှင် ပီပီသသ ကြားနေရသည်။
ညောင်ပင်၏ ခြေရင်း၌ ဘုရားရှိခိုးရန်ချထားသော သစ်သားခုံပေါ်သို့ သူတို့နှစ်ဦး ထိုင်လိုက်ကြသည်။ ညင်သာလွန်းလေစွ...။
သယ်ဆောင်လာသော ထမင်းချိုင့်လေးနှစ်လုံးအား ဘေးတွင်အသာချ၍ ပထမဆုံးအကြိမ် ကောင်လေးမှ စကားစပြောခဲ့သည်။
" ချစ်သူ .. ဘုရား ရှိခိုးကြရအောင်။ "
"ဟုတ်ကဲ့... မောင်.. "
ညင်သာ၍ နူးညံ့တိုးတိတ်သော အသံဖြင့် ပြန်ဖြေသော ကောင်မလေး၏အသံ ကောင်မလေး၏ အလှသည် ညနေဦးနှင့်အပြိုင် ကျက်သရေရှိလှပါဘိခြင်း ။
လေနုအေးသည် ပို၍ ဝေ့၀ဲလာလေပြီ။
ကောင်လေးက ရှေ့ကထိုင်၍ ကောင်လေး၏ နောက် .. မကျတကျတွင် ကောင်မလေးက ခပ်ရို့ရို့ထိုင်ခြင်းဖြင့် သူတို့ တိုးတိတ်စွာ ဘုရားဝတ်ပြုကြသည်။ မကြာလွန်းသော ဘုရားဝတ်ပြုခြင်းအပြီး၌ ကောင်လေးက ကောင်မလေးဘက် လှည့်ကြည့်သည်။ ကောင်မလေးကလည်း သဘောပေါက်သည့်အလား ခပ်ဖျော့ဖျော့ပြုံးပြသည်။ ထို့နောက် ကောင်မလေးက သူမ၏ ဆလင်းဘတ်အိတ်ထဲမှ စားပွဲတင်နာရီလေးကို ထုတ်ပေးလိုက်သည်။ ကောင်လေးက ယူ၍ အချိန်တိုက်ခြင်း၊ ရှေ့၌ ချထားခြင်း၊ နေရာယူခြင်းတို့ကို ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် ပြုလုပ်သွားသည်။ သူတို့ စကားမဆိုဖြစ်ကြပါ။ သူတို့၏ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းသည် ညင်သာအေးဆေးလွန်းလှသည်။ သိမ်မွေ့နူးညံ့သည်။ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် ရှိသည်။ သူ ... ထိုနှစ်ယောက်ကို သတိလက်လွတ်ငေးမောနေမိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မေ့သွားမိသည် အထိ...။
ဟော.. ကြည့်နေရင်းက သူတို့ ငြိမ်သက်သွားကြလေပြီ။
ဘုရားဝတ်ပြုတုန်းကအတိုင်းပင် ကောင်မလေးက ကောင်လေး၏ နောက်နားတွင် ခပ်ရို့ရို့ထိုင်နေလေသည်။ ခုတော့ နှစ်ယောက်စလုံး ညောင်ပင်ဘက်သို့ မျက်နှာမူထားခဲ့ကြသည်။ သွယ်ပျောင်းသော ခါးလေးများကို မတ်ထားကြသည်။ တိုးတိတ်စွာ သာသာယာယာ မှိတ်ထားသော မျက်ခွံများအောက်၌ လှုတ်ခတ်လွန်းသော စိတ်ဝိဥာဉ်ကို သူတို့ မုဆိုးပမာ သားကောင်လိုက်ကြလေပြီ။
သူ အလိုလိုသိနေသည်က ထိုနှစ်ယောက် ထိုသို့ ငြိမ်သက်ကြမည်မှာ တစ်နာရီတိတိ ကြာလိမ့်မည်ဆိုတာပင်။
သြော်...... ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ် သူငေးကြည့်သည်မှ မဟုတ်ခဲ့ဘဲကွယ်...။
တလွင့်လွင့် လွင့်မြူးလာသော နွေနှောင်းအကုန် မိုးဦး၏ လေပြည်သည် တောင်ပင်လယ်အရပ်မှ ရေခိုးရေငွေ့တို့ကို ပင်ပန်းကြီးစွာ သယ်ဆောင်လာရလေသည်လားမသိ။ ထိခတ်သွားသော လေငွေ့၏ အဖျားခတ်မှုသည် ညနေပီသစွာ အေးစိမ့်ခြင်းကို ပေးစွမ်းနေသည်။ ထိုလေပြည်အေးသည် ညောင်ရွက်တို့ကိုသာ ဆော့ကစားကြသည်မဟုတ်။ ငြိမ်သက်စွာ မျက်လုံးအစုံမှိတ် မလှုပ်မယှက်ထိုင်နေကြသူ ကောင်မလေးနှင့် ကောင်လေး၏ ဆံစများ၊ အ၀တ်စများကိုပါ လမ်းကြုံ လှုတ်ခတ် ကျီစယ်နေကြသည်။
သို့သော် သူတို့နှစ်ဦးကတော့ တစ်လောကလုံးနှင့် မသက်ဆိုင်သကဲ့သို့ ငြိမ်သက်ခြင်း၌သာ မွေ့လျော်နေကြ၏။
( ကျေးဇူးပြုပြီး မရွာပါနဲ့ဦးလား မိုးရယ်...။ )
တိမ်မည်းညိုတို့ လွင့်မျောမှုကို ကြည့်၍ ရုတ်တရက် ရင်ထဲ၌ တိုးတိတ်စွာ သူငြီးတွားမိရသည်။ တကယ်ဆို မိုးများသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းသောအချိန်၌ မွေးဖွားခဲ့သော သူသည် မိုးနှင့် မိုးရွာခြင်းကို အလွန်တရာ ချစ်မြတ်နိုးသူ ဖြစ်သည်။ မိုးရွာလျှင် အလွန်ပျော်တတ်ပါသောသူ ... ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မိုးရွာမှာကို မနှစ်မြို့ခြင်း ဖြစ်မိနေလေပြီ။
( သူတို့အတွက်ပါကွယ်...။ ငြိမ်းချမ်းမှုလေး တည်တံ့စေချင်တယ်...။ )
မိုးကိုအားနာသလို သူ ဖွဖွရေရွတ်မိတော့ တိမ်တွေက နားလည်သည့်အလား မိုးကို လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင်သွားပေးကြသည်။ ပြန်လည်ကြည်လင်လာသော ကောင်းကင်အနားသတ်တွင် အနောက်သို့ခရီးရှည်ထွက်ရန် ခြေလှမ်းပြင်နေသော သူရိယမင်းက အားယူ၍ လင်းချင်းပြလေသည်။
ဆံပင်ကုတ်ဝဲလေးနှင့် ကလေးဆန်ဆန် မျက်နှာကလေးနှင့် ချစ်စရာကောင်းသော ကောင်မလေးနှင့် အမြဲလို အဖြူရောင်ရှပ်အကျီကိုသာ ၀တ်လေ့ရှိပြီး ဆံပင်တိုတိုကို ဘေးခွဲဖြီးထားတတ်သော ထိုကောင်လေးကို တနင်္ဂနွေအသင်းသားအဖြစ် ပထမဆုံးအကြိမ် သူလာကတည်းက သတိထားခဲ့မိရသည်မှာ ယခုထက်တိုင်။ ဘုရားရင်ပြင်၌ သန့်ရှင်းရေးအားလုံးပြီးမှ ရောက်လာတတ်သော၊ တနင်္ဂနွေအပတ်တိုင်း တစ်ပတ်ပင်မပျက် လာလေ့ရှိသော၊ ရောက်တိုင်းလဲ ထိုညောင်ပင်ရှေ့ သစ်သားခုံ၌သာ ထိုင်လေ့ရှိသော၊ ညင်သာသိမ်မွေ့အေးချမ်းလွန်းသော ထိုနှစ်ယောက်ကို သူအမြဲလို နှစ်လို သဘောကျစွာ စောင့်ကြည့်နေခဲ့မိပါသည်။ တကယ်ဆို သူ ထိုနှစ်ယောက်ကို မသိပါ။ သိအောင်လဲ မကြိုးစားမိပါ။ မိတ်ဖွဲ့ခြင်းလဲ မရှိခဲ့ပါ။ ထိုနှစ်ယောက်ကလဲ သူ့ကို သိမည်မထင်။ သူထိုင်ကြည့်နေတတ်တာကိုလဲ သတိထားမိမည်မထင်။ သူတို့ လုပ်စရာရှိသည်ကိုသာ အေးအေးသက်သာ လုပ်သွားကြသည်ချည်းသာ။ အသက်နှစ်ဆယ်ပတ်ဝန်းကျင် ငယ်ရွယ်နုနယ်သော မျက်နှာကလေးတွေ၌ ငြိမ်းချမ်း တည်ငြိမ်သော အသွင်သဏ္ဍာန်တို့ ထင်ဟပ်နေသည်မှာ အေးချမ်းလွန်းလှပါဘိ။ အားကျနှစ်လိုခြင်းသည် သူ့ရင်၌ အုံနှင့် ကျင်းနှင့် ဖြစ်တည်ခဲ့ရသည်။
အနောက်ယွန်းယွန်း ကောင်းကင်အစွန်းတွင် နေသူရိန်သည် လောကကို တစ်ရက်တာအတွက် နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်နေသည့်အလား ညှိုးငယ်စွာ မေးတင်လေပြီ။
…….( ကျနော်လဲ နှုတ်ဆက်ပါတယ် နေမင်းရယ်...။)……..
ကောင်းကင်ကိုငေးမောရင်းမှ သူပြုံးပြလိုက်မိပါသည်။ နံနက်ဖြန် အာရုံဦးမှာ နေမင်းပြန်လာမှာပဲ မဟုတ်ပါလားလေ။ သော်တာလကို နှစ်လိုစွာ တစ်လှည့် ကြိုဆိုပါရစေဦးကွယ်....။
တီတီတီ ဟု ရုတ်တရက်ထမြည်သော နှိုးစက်နာရီလေး၏ တိတ်ဆိတ်မှုကို ဖြိုခွင်းခြင်းကြောင့် သူ့အတွေးတို့ တုံ့ခနဲဖြစ်မိရသည်။
သြော်... တစ်နာရီတောင် ပြည့်သွားခဲ့ပြီပဲ........
သူကလေးတို့၏ မျက်တောင်ကလေးများ လှုတ်ခတ်လာကြသည်။ ဖြေးညင်းစွာ ခန္ဒာကိုယ်များကို ဖြေလျော့ကြသည်။ ကောင်လေးက ညင်ညင်သာသာ နောက်သို့ လှည့်ကြည့်လာသည်။ ကောင်မလေးက အလိုက်သင့် ပြုံးပြသည်။ ထို့နောက် ဘုရားဘက်သို့လှည့်၍ ဦးချကန်တော့ကြသည်။
ရွှေတိဂုံသည် အလွန်တရာ သပါယ်ပါပေသည်။ သို့သော် သူကလေးတို့ နှစ်ဦး၏ ရသကြောင့် ပို၍ပင် ပန်းချီဆန်နေသည့်အလား သူ့စိတ်တွင် ထင်မြင်မိရသည်။
သူ...... ထိုအခိုက်အတန့်လေးကို အလွန်တရာ ချစ်မြတ်နိုးလှပါသည်။
ကောင်လေးက ကောင်မလေးဘေးမှ ထမင်းချိုင့်နှစ်လုံးအား ကောက်ယူရင်း ထရပ်သည်။ ကောင်မလေးက နာရီးလေးကို သိမ်းဆည်းရင် ဆလင်းဘတ်အိတ်ကို လွယ်သည်။ ထို့နောက် သူတို့ခြေလှမ်းများ စလေပြီ။ သူသည်လည်း ထိုအခါမှပင် ထိုင်နေရာမှာ ထမိရပါသည့်အဖြစ်။ အချိန်အတော်ကြာ မှီထိုင်နေခဲ့သော ဇရပ်တိုင်နှင့် ဇရပ်ကို အကြည့်ဖြင့် သူ နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။
သူ အသာအယာပင် ရှေ့မှ ထွက်ခွါသူနှစ်ယောက်နောက် တိတ်တဆိတ် လိုက်လာခဲ့လိုက်သည်။ ထိုနှစ်ယောက် ဦးတည်နေသော အရပ်ကို သူသိနေပါသည်။ သိနေခဲ့ ပြီးပါပြီ.......။
" ချစ်သူ ... ခုနက တရားထိုင်ရတာ အဆင်ပြေရဲ့လား... "
" ဟုတ်ကဲ့ .. ပြေပါတယ်မောင်... လေထဲမှာ မိုးငွေ့ကိုရတော့ မိုးရွာမလား စိတ်ပူမိရသေးတယ်.... ဒါပေမယ့် သိပြီး ပျောက်သွားတာပါပဲ မောင်...... "
" ဟုတ်တယ် ... မောင်လဲ အဲ့လိုပါပဲ... နဲနဲပူသွားမိတယ်... နောက်မှ ပြန်ငြိမ်တာ.. "
" မိုးရွာမလား မသိဘူးနော်... မောင် ကျွန်မကို လိုက်မပို့နဲ့တော့လေ..."
" ရပါတယ်ချစ်သူ... မောင် ချစ်သူကို လိုက်ပို့ပြီးမှ ပြန်မှာပါ.. မိုးရွာလဲ ထီးပါတာပဲမို့လား... ပြီးတော့ ချစ်သူတို့ လမ်းနားက ညဈေးမှာ ဘုရားဆွမ်းတော်တင်ဖို့နဲ့ မေမေ့အတွက် ပန်းသီးနဲနဲလောက် ၀ယ်ချင်သေးတယ်..."
" ဒါဆို အတော်ပဲပေါ့ မောင်... ကျွန်မလဲ တစ်လက်စတည်း မောင်နဲ့တူတူ ၀ယ်မယ်လေ... မေမေကတောင် ပန်းသီးစားချင်တယ် ပြောနေသေးတယ် မောင်ရဲ့.... "
ကောင်လေးက ခပ်ဖွဖွပြုံးသည်။ ကောင်မလေး၏ လက်ကလေးကို မလွှတ်တမ်း ဆုပ်ကိုင်ထားခဲ့ရင်းက ဆိုက်ရောက်လာသော ၄၈ အမြန်ကားပေါ်သို့ သူတို့ တက်သွားကြလေသည်။
သူတစ်ယောက်သာ မှတ်တိုင်၌ ယောင်ချာချာ ဖြစ်ကျန်ခဲ့သည်။
နေမင်းသည် အနောက်အရပ်သို့ လုံးလုံး ထွက်ခွါသွားခဲ့ပြီ။
ညဦးသည် နီယွန်မီးရောင်များအောက်၌ လှပတင့်တယ်လာလေပြီ။
သူကလေးတို့လိုက်ပါသွားသော ထိုခရီးသည်တင် မထသယာဉ်၏ နောက်မြီးပိုင်းကို သတိလက်လွတ်ငေးမောနေခဲ့မိပြီးမှ သူ ဖွဖွညင်ညင် ပြောလိုက်မိပါသည်။
( နှုတ်ဆက်ပါတယ် စုံတွဲကလေးရယ်.... အကယ်၍ လောကအပြောင်းအလဲတွေ မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့.... နောက်တစ်ပတ် တနင်္ဂနွေညနေမှာ ပြန်ဆုံချင်ပါသေးတယ်ကွယ်....။)
( ကျနော် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘ၀ ရွှေတိဂုံကုန်းတော် သန့်ရှင်းရေး တနင်္ဂနွေအပတ်တိုင်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော ကျနော်မသိသော စုံတွဲတစ်တွဲအကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထိုစုံတွဲကလေးကို ကြည့်ရင်း .. ကျနော် မျှော်လင့်ခဲ့မိဖူးပါသည်။
တစ်နေ့ ကျနော့်တွင် ချစ်သူရှိလာသော အခါ......... )
တစ်စုံတစ်ခုရဲ့ နောက်ကွယ်က ကိုယ်...........
အဲ့ဒီ လူပြောများတဲ့ အဆိပ်ရည်ကို
မတော်တဆ ငတ်ကြီးကျ မြိုမိပြီးကာမှ
ဘယ်ဘက် ရင်ဘတ်တစ်ခြမ်းက မျက်တတ်တတ်နဲ့
ချစ်တတ်လွန်းခဲ့တာကိုက ကိုယ့်အမှားတစ်စွန်းတစ်စပဲ ဖြစ်ရမယ်
ကျကျသွားတဲ့ ရှိစုမဲ့စု သိက္ခာတွေကို
အပေါ်.. အောက်.. ဘေး
သုံးမျိုးသာ ရွေ့လို့ရတဲ့ ဒီဝလုံးထဲ
သုညကို အိတ်ကပ်ထဲထည့် ရိုးသားခြင်းနဲ့ ရှင်သန်မဟေ့လို့
ပြောပြောမိတဲ့ ကိုယ့်စကားတွေ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်ပြီး
ထမ်းပိုးနေရတာလောက် ဘယ်အရာမှ လေးမယ်မထင်ဘူး
လက်ခုပ်ဆိုတာ တစ်ဖက်တည်းတီးလို့ မြည်ရိုးမှ
မ___ ကောင်း____ ဘူး။
သံခင်း တမန်ခင်းတွေ မလာခင်ကတည်းက
" နောက်တစ်ကြိမ် " ဆိုတာကို နဲနဲလောက်
လှုပ်ရှားမှုတွေကို တဆိတ် ရပ်တန့်ပေးပါလား
ငြိမ်သက်ခြင်းတွေထဲ ကိုယ်ခြေရာ ခန ဖျောက်ပါရစေ
ချစ်သူအပေါ် ရိုးသားမှု ဘယ်လောက်ရှိလဲ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆန်းစစ်ရဦးမယ်။ ။
Posted by ဇော် at 3:58 PM3comments:
အွန်ဒျူတီ.... ( On Duty )
အမှုန်တွေ ဘယ်လောက်များ ပါဝင်နေသလဲ
ငါ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ပြန်ဖူးပွင့်မယ်။
နားထဲမှာ အသံတွေ ထပ်နေတယ်
နာရီကို ခနခန ငေးတယ်
ယိုင်လို့ ကောင်းနေကြတုန်း....။ ။
Posted by ဇော် at 2:24 PM4comments:
အဲ့ဒီနေ့က မိုးမရွာပါဘူး။ စာဖွဲ့ရလောက်အောင်လဲ ကဗျာမဆန်ခဲ့ဘူး။ နောင်တစ်ချိန်မှာ မချစ်တတ်တဲ့ကျွန်မကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်အောင် သင်ပေးခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီချစ်သူကို ကျွန်မ စတင်သိကျွမ်းခဲ့ရတဲ့အချိန် ကျွန်မရဲ့ ချစ်သူဟာ တံခါးမခေါက် စစ်မကြေငြာပါဘဲ ကျွန်မနှလုံးသားကို စစ်ဆင်ခဲ့တယ်။ ချစ်သူရဲ့ နည်းဗျူဟာအဆင့်ဆင့်မှာ ကျွန်မ နစ်မွန်း ... ရုန်းမရအောင် နှောင်ဖွဲ့ခဲ့တယ်။
ချစ်သူကို ကျွန်မ သိပ်ချစ်ခဲ့တယ်။
မောင်လို့ နှလုံးသားဆီကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အဲ့ဒီ နာမ်စားလေးတစ်ခုမှာ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းတို့ အလေးချိန် ဘယ်လောက်များများ ပါဝင်နေမယ်လို့ မောင်ထင်လဲဟင်...
စာအုပ်ရဲ့ ပထမစာမျက်နှာမှာကတည်းက မောင့်ကို ကျွန်မက ချစ်ခဲ့ရတာပါ မောင်..
ကျွန်မကို ချစ်သူလို့ ခေါ်တတ်ခဲ့တဲ့ အေးဆေးငြင်သာစွာ စကားပြောတတ်ခဲ့တဲ့ မောင့်ရဲ့ ရင်ထဲကို ကျွန်မ ခနလောက်ဖြစ်ဖြစ် ၀င်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမှာ အပေါ်ယံတွေများ အချိုးညီ ရောပါနေခဲ့ပါသလား။
တိတ်တဆိတ် မေးခွန်းထုတ်ရင်း ဒီသံသယတွေကို ကျွန်မ ခ၀ါချပစ်ခဲ့တာ မောင် စိတ်မကောင်းမှာ စိုးရိမ်မိလို့ တစ်ခုတည်းပါ။
ချစ်သူကို လေးနက်စွာ ကျွန်မချစ်ခဲ့တယ်။ မြတ်နိုးစွာ တန်ဖိုးထားခဲ့တယ်။ ရူးမိုက်စွာ တိတ်တိတ်လေး မျှော်လင့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်မအတွက် တန်ပြန်မှုက တံလျှပ်တဲ့လား မောင်။
အဲ့ဒီ မောင်ခိုဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ရင်ခွင်ကလေးက ကျွန်မကို သိသွားခဲ့တော့ ကျွန်မရှေ့မှာ သူကလေး ငိုခဲ့တယ်။ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုခဲ့တယ်။ ကျွန်မကို ချိန်းခြောက်ခဲ့တယ်။ တောင်းပန်ခဲ့တယ်။
မောင်.... မတ်မတ်ရပ်နေခဲ့တဲ့ ကျွန်မ၊ တုတ်တုတ်မလှုပ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မ၊ တုံဏှီဘာဝေ နေခဲ့တဲ့ ကျွန်မကို အသည်းနှလုံးမရှိ၊ ကိုယ်ချင်းစာတရားမရှိတဲ့မိန်းမလို့ သူကလေး ထင်ရော့မယ်။
တကယ်က မောင်ရယ်.. ရှင်သာ မြင်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကျွန်မ ဘယ်လောက်နာကျင်ခဲ့လဲဆိုတာ ... ဘယ်လောက်ရင်ကွဲခဲ့ရသလဲဆိုတာ.. ဘယ်လောက်အထိ အရုပ်ကျိုးပြတ်ဖြစ်ခဲ့ရသလဲဆိုတာ...
ကျွန်မကိုကျ ဘယ်သူတွေများ စာနာနိုင်ခဲ့ကြပါသလဲ.....
ကျွန်မမောင့်ကို သိပ်ချစ်ခဲ့မိတာ သူကလေးကို မသိခဲ့လို့ပါ။
ဒါပေမယ့်မောင်.... ချစ်ခြင်းမှာ တားဆီးလို့ရရိုး ထုံးစံ ရှိခဲ့ပါသလား။
မောင်ပြောသမျှ ကျွန်မနားထောင်ခဲ့တယ်။ မောင်ဆိုသမျှ ကျွန်မလက်ခံခဲ့တယ်။ မောင်ချော့သမျှ ကျွန်မပြုံးခဲ့တယ်။ ကျွန်မကို ဦးနှောက်မရှိသူလို့ပဲ ဆိုဆို၊ အရူးလို့ပဲ သတ်မှတ်ချင်သတ်မှတ်၊ မိုက်မဲသူလို့ပဲ ပြောပြောပါမောင်...
ကျွန်မချစ်တဲ့ ချစ်သူကို ကျွန်မ မြတ်နိုးစွာ ချစ်ချင်ပါတယ်။
မောင့်အပေါ်မှာ တစ်ခါမှ စိတ်မဆိုး စိတ်မကောက်တတ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မကို စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖို့ မောင်ပြောခဲ့တုန်းက ကျွန်မ လေးလေးနက်နက် ပြုံးခဲ့မိတယ်။ ကျွန်မစိတ်ဆိုးရင် မောင် ကျွန်မကို ငြူဆူတော့မှာ၊ ကျွန်မစိတ်ကောက်ရင် မောင်ကျွန်မကို ထားသွားခဲ့တော့မှာ။
အခု ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းပါ။ မောင်မေ့လျော့နေတဲ့ မောင့်ကိုသိပ်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဒီကောင်းကင်ကြီးအောက်မှာ တစ်ယောက်တည်း ငြိမ်ငြိမ်ဆိတ်ဆိတ်ရှိနေခဲ့ပါတယ်မောင်။ အဲ့ဒီ မိန်းကလေးက သိပ်ဟန်ဆောင်ကောင်းတာမောင်ရဲ့။ သူက အမြဲပြုံးနေတတ်တယ်။ သူ့ကို သူ့ချစ်သူအကြောင်းမေးတာကို ကြုံရတိုင်း ချစ်သူက သူ့ရင်ထဲမှာ အမြဲရှိပြီး ချစ်သူကလဲ သူ့ကို သိပ်ချစ်တာပေါ့လို့ ဖြေတတ်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူငိုနေတာကိုတော့ ဘယ်သူမှ မသိခဲ့ပါဘူးမောင်။ သူ့ရင်တွေ သိပ်နာကျင်နေရတယ်။ ဒဏ်ရာတွေ ထပ်နေခဲ့တယ်။ ရင်ကွဲနေခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကို ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။
ကျွန်မဆိုတဲ့ မောင့်ကိုသိပ်ချစ်တဲ့ အဲ့ဒီမိန်းကလေးအတွက် ကံတရားက အဲ့ဒီလို သတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လဲလေ... ကျွန်မတစ်ခုလောက်ပဲ တောင်းဆိုခွင့်ရှိပါရစေ။ ချစ်သူကို သိပ်ချစ်ခဲ့မိတဲ့ ဒီရင်... မြတ်နိုးခွင့်တော့ ရှိသင့်ပါတယ်လေ။
အဲ့ဒီနေ့က မောင့်မွေးနေ့ပါမောင်။ ကျွန်မလေ တစ်နေကုန်ကို စိတ်ပင်ပန်းစွာ စောင့်နေခဲ့မိတာပါ။ မသိစိတ်က မောင် ကျွန်မဆီလာမှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ သိနေခဲ့ပေမယ့် သိစိတ်က ... ဟင့်အင်း... မောင်လာမှာပါ။ မောင်က ငါ့ကို ချစ်ပါတယ်လို့ မျက်လုံးစုံမှိတ် ငြင်းဆန်အားပေးနေမိခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့် အချိန်တွေက သစ္စာရှိစွာနဲ့ အခြေအနေမှန် အဖြစ်မှန်ကို သက်သေထူသွားခဲ့တယ်။ ကျွန်မရဲ့ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကျွေးမှုကိုကျ ဘယ်သူတွေများ အသိအမှတ်ပြုပေးခဲ့ကြပါသလဲ။ ကျွန်မရဲ့ ကွဲအက်နေတဲ့ နှလုံးသားကို ဘယ်သူတွေများ မြင်တွေ့ခဲ့ကြပါသလဲ။
ကျွန်မ ရယ်နေပါတယ်မောင်။ ကျွန်မ ပြုံးနေဆဲပါ။ မျက်လုံးပေါင်းများစွာရှေ့ တည်ငြိမ်စွာ ဟန်ဆောင်နေဆဲပါ ..... ဘယ်ဘက်ရင်အုံအောက် ဒဏ်ရာရ နှလုံးသားတစ်ခုနဲ့အတူ............
သူများတွေ အသဲကွဲကြတယ်ဆိုတုန်းက ကျွန်မ ဟားတိုက်ရယ်မောခဲ့ဖူးပါတယ်။
လူတွေပြောကြတဲ့ ချစ်သူကိုလွမ်းကြောင်း စကားလုံးပေါင်းများစွာ စာဖွဲ့မှုပေါင်းများစွာ ကျွန်မ ကြားသိရတိုင်း ကျွန်မ ပြုံးစိစိလုပ်ရင်း ပြန်ငေးကြည့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
နာကျင်တယ်ဆိုတာ ဂျိုနဲ့လားလို့ နောက်ပြောင်တတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ကျွန်မ မောင့်ရဲ့ မေ့လျော့မှု၊ လစ်လျူရှုမှုအောက်မှာ ဒဏ်ရာနက်နက်တွေနဲ့ပေါ့။
တွေ့ဆုံခွင့်မရှိခဲ့တော့ဘူးဆိုရင်လေ ကျွန်မကို လှည့်မကြည့်စတမ်း ထားသွားခဲ့လိုက်ပါ။
မောင်ထားခဲ့တဲ့ ဒီနေရာလေးမှာပဲ ကျွန်မ တိတ်တိတ်လေး ရပ်ကျန်ခဲ့ပါရစေ .....
မောင်ချန်ခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီခြေရာတွေကို ငေးကြည့်နေခဲ့ရင်း............
Posted by ဇော် at 6:01 PM2comments:
ကျနော် မမွေ့လျော်တော့ပါဘူး မေမေရယ်
ကျနော် မကျေမနပ် ဖြစ်ရတယ်။
မမျှတဘူး ...... မတရားဘူး.........
ငါ ..... လွန်တယ်တဲ့....
၀မ်းနည်းပက်လက် ငါ ငိုမယ်
ကျနော် မွန်းကျပ်လွမ်းလှပါတယ် မေမေရယ်
ကျနော့် ကိုယ် .... စိတ်.... နှလုံး.... သုံးပါးလုံး
နံနက်ဖြန်မှာ ကျနော်ကို မေ့သွားကြမယ့် သူတွေထဲ
အာဃာတနဲ့ ကျနော် မပတ်သတ်ချင်တော့ပါဘူး
အဲ့ဒါကမှ .... ငါ့ပန်းတိုင်အစစ်ဖြစ်တယ်။
Posted by ဇော် at 10:07 AM6comments:
ကျနော်နှင့် ...... ကျနော် (သို့မဟုတ် ) မိုင်တိုင်န...